musha nyika dzakabatana Vatambi veBasketball Bam Adebayo Yevacheche Nyaya Yenyaya Uye Untold Biography Chokwadi
Iyo Biology yaBam Adebayo inopa ruzivo rweYake Yevacheche Nyaya, Hupenyu hwepakutanga, Vabereki (John Adebayo naMarilyn Blount), Mhuri. Kunyanya zvakadaro, Hupenyu hwaBam Adebayo Hupenyu, Hupenyu, uye Networth.
Muchidimbu, iyi ndiyo Historical rekodhi yeAmerican basketball player akasimuka pamusoro pehurombo uye zvipingamupinyi zvake kuti ave mutambi wenyeredzi mumunda.
Kuti uvandudze hunhu hwako hwehupenyu hweanonakidza mamiro eBam Adebayo's Biography, isu takaona zvakakodzera kuti aratidze Hupenyu Hwekutanga uye Rise Gallery. Tarisai, pfupiso yeiyo NBA nyeredzi Hupenyu Hupenyu.
Bam Adebayo's Biography - Tarisa Hupenyu Hwake Hwekutanga uye Kubudirira Nhau.
Kunyangwe nerukudzo, semutambi weNBA, vashoma chete vadikani vebasketball vanoziva chaizvo Biography yaBam Adebayor. Nekudaro, takaita ongororo kuti tigadzirire iwe chete. Pasina kunonoka, ngatipindei mukati.
Bam Adebayo Nyaya Yehucheche:
Imwe yemifananidzo yekutanga yaBam - seMukomana mudiki mumaoko amai vake. Sezvo iye anotarisa nekudada kukuru mumaziso ake pamwanakomana wake.
Kune vatangi veBiography, mutambi ane zita remadunhurirwa rekuti "Bam Bam". Bam Adebayor akaberekwa musi we 18th waJuly 1997, kuna amai vake, Marilyn Blount, uye baba, John Adebayo, muNewark, United States.
Bam Adebayo akauya kupasi semwana wekutanga, akaberekwa nemubatanidzwa pakati pevabereki vake. Mufananidzo waBam naamai vake unoratidza kuswedera uye kuti vanoreva nyika zvakadii kwaari.
Marilyn Blount NaBam Adebayo Vachitsvaga Iyo Kamera Vachinyemwerera Kumeso Kwazvo.
Iyi nhanho muhupenyu hwaBam Adebayo yaive izere nenyaya, zvese zvinonakidza uye zvinobata. Ndangariro dzaamai vachigadzirira kudya kwemangwanani vasati vaenda kubasa uye mudiki Bam anotamba mutambo wake webhasikiti kusvika kwayedza.
Maziso asina ruzivo aBam akatarisa amai vake vachienda kubasa, kungave kunaya, kupenya kwezuva uye nekuwedzera kudaro vachifamba kuenda kubasa mazuva ese, hazvina kumusiya.
Chechipiri, kugara uchienda kuchikoro uye uchiteerera kushamwari dzake ngano dzezvavakawanirwa nababa vavo pamazuva avo ekuzvarwa. Zvinosuruvarisa, haana kuzombowana mufaro iwoyo, zvichimuita kuti acheme uye ave neshungu zuva rese.
Kupfupisa, izvi zviitiko haana kumbosiya mukomana wechidiki. Kunyange zvazvo akanga asina vanun’una vokurera navo, vavakidzani vake neshamwari duku vakazadza nzvimbo iyoyo. Bam Adebayo haana kumbonzwa kusurukirwa kunyange sezvo Baba vake, John Adebayo, vakanga vasipo kwaari.
Bam Adebayo Mhuri Background:
Mukusavapo kwakanyanya kwababa vake, amai vebasketball vaitofanira kushanda zvakanyanya. Amai vaBam Adebayo, Marilyn Blount, vaishanda papurazi renyama retaundi semubhadhari, vaine muhoro we$230.
Nekudaro, imba yavo, tirera yakafara imwe chete ine magirazi egirini uye black louvre, yaive yega Marilyn Blount. Uroyi hwehupenyu hweguta hwakange husiri hupenyu hwaBam Adebayo akakurira nahwo.
A Rare Photo of The Trailer Bam Adebayo uye Marilyn Blount Anoshevedzwa Kumba muNorth Carolina.
Akakurira mutrailer, asi Marilyn Blount aigara achisimbisa mvura, mwenje, uye Terevhizheni yakamisikidzwa kwaaitarisa mitambo yake yebhasikiti. Yaive imba yakazvininipisa asi ine mutoro.
Bam Adebayo Mhuri Kubva:
NeNyika, nyeredzi yemumunda muAmerica ane Citizenship yeUnited States. Iye ane hukama pamwe chete naamai vake, muAmerican American, chizvarwa cheNorth Carolina nababa vake, (John Adebayo) weWest Africa, chaizvo Nigeria.
Ivo Vababa Uye Vanamai Vanababa vaBam Adebayo Achiratidza ake Akawanda-Mujaho.
Iro zita rekuti Adebayo rakanyanya pakati pevana veNigerian Yoruba, zvinoreva kuti, 'Akazvarwa munguva yekufara'. MaYoruba anotora nzvimbo yekumaodzanyemba kwakadziva kumadokero uye vanogadzira vangangoita gumi muzana yevagari vemuNigeria.
Bam Adebayo Dzidzo:
Pakasvika nyeredzi yeramangwana yezera rechikoro, akanyoreswa kuNorthside High School, North Carolina. Mushure mezvo, amai vaBam Adebayo (Marilyn Blount) vakamuendesa kuHigh Point Christian Academy seChidzidzo chake chinotevera.
Iyo Northside High Chikoro, uko Bam Adebayo Akaenda Kwake Preschool Sessions.
Kutevera chirevo chakakurumbira, "Kudzidza hakumboperi kusvikira munhu afa," Bam akapfuurira kuYunivhesiti yeKentucky kunodzidziswa kukoreji mushure mekusekondari. Tarisa NBA nyeredzi, vese vakura.
Mhemberero Yekupedza Kudzidza yaBam Adebayo Nemakosi Avo kuKentucky University.
Chinhu chimwe chete hachina kumbosiya muNigeria mukufora kwake muchikamu chedzidzo: kuda kwake basketball. Pasina kupokana, kana Bam achiwedzera kukura, ndipo paanova nani pazviri. Nokudaro, pasina nguva, akabvuma mumwoyo make kuti awane chouviri kubva mumutambo wacho.
Bam Adebayo Basketball Nyaya - Kubva Pamazuva Ekutanga:
Nekutenda, mazuva ekumhanya achitenderedza nharaunda pane imwechete iron yakaora ngoro inotakurika mumigwagwa yakabhadharwa. Kunyangwe chinangwa chekutanga chaBam chebasketball chainakidza kumhanya, ramangwana rine zvirongwa zvaro.
Nepaunogona napo pose, kukwana kunoda kuvandudzwa. Nekukurumidza mukudzidza, akashanda papfuti dzake, rebounds uye kudzivirira. Pakupedzisira, semudiki munguva yezhizha, Bam akabatana neAmateur Athletic Union (AAU) Team, Yakarodzwa, kuNorth Carolina.
Dennis Smith Jr, Bam Adebayo, Uye Vamwe Vanotorwa muTimu Yakatakura North Carolina.
Achiri kufambira mberi neRoaded, akatora chikamu muNBPA Top 100 Camp uye akawana zita reMutambi Anonyanya Kukoshesa pa2015 Under Armor Elite 24 Game. Muvhidhiyo yemutambo uya usingakanganwike wakamutorera rukudzo, Bam vakapotsa vadhonza basketball Net.
Bam Adebayo Biography - Rwendo rweMukurumbira Nhau:
Pakarepo mushure memwaka wake weJunior, akaendesa kuHigh Point Academy, achijoinha timu yeBasketball (HPCA). Mukutanga kwake kuzorwa neNew Garden School, akarova zvibodzwa makumi maviri nezviviri uye gumi neshanu rebound kuti awane kuhwina. Heano Bam mune HPCA mavara.
MuHigh Point Academy Neboka Rake. Unogona kuona Bam Adebayo?
Kupfuurirazve, seMukuru, akatungamira timu yake kumakwikwi eNorth Carolina Independent Athletic Association.
Kumufaro wemhuri yeBam Adebayo, yavo chaiyo yakave McDonald's All American, Mr Basketball uye Mutambi wegore. Heino mufananidzo waakapemberera kukunda naAmai vake (Marilyn Blount) – padivi pake.
Muna 2016 Bam Adebayo Vakagamuchira Iwo Mubairo waMr Basketball, Player wegore, Uye MacDonald's All American.
Chekupedzisira, iyo inoshuvira NBA nyeredzi yakapedza mwaka senge mukwikwidzi akanakisa chikoro chesekondari tarisiro uye yakanyanya simba rinotungamira kumberi. Anosarudza nhamba yegumi nenhatu yejezi rake - achifunga nezvekuenda kuYunivhesiti - uyezve kuwana kokero kuChikwata cheKentucky.
Bam Adebayo Bio - Iyo Yakabudirira Nyaya:
Kevin Graves, murairidzi wake, aive nezvinetsekana nezve kuenda kwake kuKentucky. Kuchikoro chesekondari, Bam Adebayo aive 6 '10 achitamba achipesana ne6' 4 ″ vatambi, asi kukoreji, vatambi vese vaive 6 '10, yaive dambudziko kune vechidiki Bam.
Nekudaro kudiwa kwekuvandudza mutambo wake, saka Makuva akasheedza rubatsiro rwaRasheed Wallace, uyo aive mana-nguva NBA All-Star, kudzidzisa Bam Adebayo. Uye akamudzidzisa kwemwedzi mitatu maitiro ekutamba achipesana nevatambi vakareba.
Rasheed Wallace NaBam Adebayo Mushure meimwe yeZvidzidzo zveVadzidzi muBrown YMCA.
Muna 2017, Bam akabatana neKentucky University kuchikoro chake chekoreji, achiva rookie pachikwata chekatsi yemusango. Nekudzidziswa kwake, dunks dzake dzinoshamisa uye kuita kwake kweStud-senge, Bam Adebayo anotyora Anthony Davis dunk rekodhi ine muganho we62 mapoinzi.
Yakakomberedza mwaka we2O17 neKati Dzemusango, Bam akawana kuhwina kwakawanda. Akatamba mitambo makumi matatu nesere, akaenzana 38 mapoinzi, 13.0 mabhuru uye 1.5 rebound. Chekupedzisira, akatumidzwa zita SEZVO ZVESE Zvitsva Murume weGore uye Sec Chekutanga Chikwata.
Bam Adebayo ndiye Munhu Nyowani weGore 2017 muKentucky Wild Cats Team.
Mumwedzi inotevera yaJune, Miami Heat yakanyora rookie pakati peiyo yakazara NBA Draft. Uye muna Chikunguru 1, akasaina kontrakiti yake ye rookie, akazobatana neiyo 2017 NBA Summer League timu.
Pat Riley uye murairidzi Erik Spoelstra Kugamuchira Player 13 kuMiami Heat Team muna 2017.
Bam Adebayo NBA Nyaya:
Iye mutambi weRising Basketball akafambira mberi zvakanyanya paakanyora basa rake rekutanga nerechipiri zvakapetwa kaviri mugore ra2019. Bam akazowana zita rekuti Eastern Conference Player yaDecember uye Trophy yeChikwata chake.
Kupfuurirazve, muna Ndira gore iro, mutambi (kumufaro waAmai vake) akawana kukokwa kuNBA Yake Yese-Nyeredzi Mutambo. Zvinotoshamisa kuti zvakatora isingasviki mwedzi asati atanga kuunganidza mbiri.
Bam muna Kukadzi vakahwina iyo NBA Yese-Nyeredzi Yevhiki Yekudzidzira Skills Dambudziko. Zvakare, akazove mumhanyi-wekunyanya Kudzivirira uye Kuvandudza Mutambi weGore Mubairo.
Anofara Bam Adebayo Ari Kuratidzira ake Trophies seNBA Winner Uye Eastern Musangano Player weGore.
Pakupedzisira, Muna 2020- 2021, akavandudza chibvumirano chake neMiami Heat kwemakore mashanu. Pamwe chete naJimmy Butler, ivo vakaita rekodhi rekodhi yemakunduru-akapetwa kaviri mumutambo mumwechete uye vakahwina menduru dzegoridhe mumutambo we2020 National Olimpiki nemitambo yeTokyo.
Bam Neboka Rake muTokyo 2020, Uye Jimmy Butler muOlympics vari kurudyi.
Panguva yekunyora Bam Adebayo's Biography, akaita metamorphosed kuita imwe yeNBA inonyanya kuvimbisa nyeredzi. Uyu mukomana akatanga seamateur, uye zvino, ane hushingi mudziviriri.
Zvinoenderana neESPN, Bam ndivo anotyisa, akanakisa NBA mutambi mafeni mazhinji haazive. Iye mutambi ane hunyanzvi ane makumbo nemaoko zvinogadzira basketball yakanaka waltz padare. Vamwe vese, ivo vanoti, inhoroondo.
Ndiani Bam Adebayo Kufambidzana?
Nechitarisiko chinoyemurika, chinodiwa, mudiki uye anoda chinzvimbo, mutambi wemoto anogona kunge aine runako rwakanaka, rwakaumbwa zvakanaka parutivi pake. Kwete kukanganwa kuti Bam Adebayo aisazouya mukutongwa kana akabatana nevasikana vakawanda.
Mushure mekutsvaga muhupenyu hwepachivande hwaBam, anochengeta icho chikamu chehupenyu hwake chakavharwa kubva kune tabloids. Somugumisiro, nzvimbo yake yehukama haizivikanwi. Hatizezi kuti achawana wokuroorana naye akakodzera nokukurumidza.
Kunyangwe pasina Kusimbiswa kwekuti ndiani waari kufambidzana naye, takawana iyo American Bam Adebayo mune kambani yevevvy yevasikana.
Iko kune, zvakadaro, hapana ruzivo pamusoro pekuti ndiani madzimai aya uye nekumira kwavo neye basketball player. Asi isu tinochengeta matanda akavhurika sekuuya mune ramangwana, mwenje unogona kuburitsa zvimwe chokwadi.
Bam Adebayo Vakagara Zvakanaka muKambani yeBevy yeLadies.
Bam Adebayo Hupenyu hweMunhu:
Chii Chinomutyaira? Kune ngano yebhasikiti, kuda kuziva kwezvaanoita kunze kwedare kunotifukidza. Kutanga, 'Cancer', chiratidzo chake cheZodiac, inoratidza medalist seanoziva uye akavimbika.
Nekuda kwekutambudzika kwaamai vake kumurera ari ega, Bam Adebayo vakagadzira iyo BAM Foundation mu2017 kutsigira vabereki vari vega nevana vavo. Kugara uchitambira Thanksgiving kupa uye Chipo Chikoro Packs kwavari.
Iyo Bam Foundation paKutenda Nezvipo Mapakeji Evana.
Kenza Murwere- Felicia Turner:
Kechipiri, chiitiko chemhuri yaBam Adebayo neCancer chakamuendesa kwenyaya yaFelicia Turner. Iye murwere wekenza yehuro uyo akarwisa hutachiona kaviri. Kutevera kwezvikamu zvechemo kumusiya naMark ayo.
Zvakare, maitiro akasiya Felicia Turner aine izwi raspy, mazino ake ese aenda. Uye aigara achidya, sezvo aisakwanisa kumedza chero chinhu. Bam Adebayo akamubatsira nemari yekurapa uye rwendo rwekuona mitambo yeMiami.
Iyo Inobata Mufananidzo waBam, Murairidzi Kevin Graves, Felicia Turner Naiye Grandkids muMiami Mitambo.
"Usambokanganwa zvauri, uye usatombokanganwa kwauri kuenda." mazwi amai vake (Marilyn Blount) achiramba achidzokororwa kwaari. Chokwadi, Bam Adebayo anopa zvese zvaakashaiwa kana achikura uye haana kumbokanganwa kuona kwake kwakashata kumashure.
Bam Adebayo- Mararamiro:
Munhu wemuAfrica wekuAmerica haaratidzi pfuma yake kuratidza hupenyu hwehupfumi. Uyewo haatore kumasocial media kuti awedzere kudada kana kushamisira. Izvo hazvireve, zvisinei, kuti Bam Adebayo haana chekuratidzira.
Pakati pezvinhu zvake zvemota pane imwe kumira; Iyo Range Rover Nhabvu. Isu tese tinobvumirana kuti mota ino bespoke runako uye maficha ayo akasarudzika, zvichiita kuti zvive zvakakosha kuve nazvo.
Uye kuna Bam Adebayo, zvinowedzera chimiro kwaari, sekuratidzwa kwemufananidzo.
Mutambi weAmerican Miami Achibheja Nayo Range Rover Nhabvu Yemitambo Yakapfeka muPecific Yakanakisa Pairi yeSutu.
Kuzorora kubva kubasa kana chero chimwe chiitiko ndochinodiwa nemunhu wese. Uye kuna Bam Adebayo, uyo anoshanda asingamire uye anogara akasimba kumitambo yekurovedza muviri. Iye zvechokwadi anokodzera imwe yake. Pfungwa yechikepe chengarava ndiyo chaiyo nzira yekutiza kubva pasirese.
Pasina kutaura, getaways inogona kunge isingafadzi kana isu tisingavashandise neakakosha iwo muhupenyu hwedu. Uye kune uyu mutambi anoshamisa, amai vake (Marilyn Blount) anogara ari anotevera, kushandisa nemufaro mazororo epamba uye zororo.
Rakanaka Cruise NaBam Adebayo Uye Marilyn Blount Massively Kunakidzwa Nguva Dzese.
Bam Adebayo Biography - Networth:
Parizvino, nemvumo kubva kuNBA, Investment neMedia ventures, inosanganisirwa kuve yechipiri-yakabhadharwa mari mutambi kuchikwata chake nemubhadharo unokosha madhora zviuru mazana matatu nemakumi matatu nemaviri nemakumi matatu nemakumi mana nemakumi mana, mambure aBam Adebayo akakosha mari inosvika madhora zviuru zvishanu.
Bam Adebayo Hupenyu Hwemhuri:
Vanhu vanoomerera padanho rako rinonyanya kunetseka, avo vanogara vakagara kana munhu wese aenda. Chokwadi, imba yako inofanirwa kuve newe munguva yekuzivikanwa uye kubudirira. Iyi ndiyo nyaya yaBam Adebayo naamai vake.
Chimiro Chakanaka cheRudo Uye Mufaro Pakati peMwanakomana naAmai Kuzorora.
Mhuri ndicho chinoshuvira munhu wese; inogona kuva mhuri yose kana kuti nhengo chete. Muchikamu chino, tichazivisa nhengo dzemhuri yeAdebayo.
Baba vaBam Adebayo:
John Adebayo ndiye baba vekuzvarwa vemutambi ane mukurumbira. Zvinosuruvarisa, akaparadzaniswa naamai vake, Marilyn Blount, mushure mokunge vatamira kuNorth Carolina. Wese mwana anokodzera rudo rwababa uye kutarisirwa kwemubereki.
Kurwadziwa uye hasha Bam wechidiki aive kwaari asati afa kusvika pakuramba zita rekuti Adebayo nekuti aisada kushamwaridzana naye.
Hapana pembedzo yokurega mumwe munhu mabasa ake nemitoro, zvikurukuru iyo yomwana. Zvinosuruvarisa, hapana mifananidzo yababa vake.
Amai vaBam Adebayo:
Mukupesana, rudo rwaamai rwaMarilyn Blount ndizvo izvo mwana wese anofanirwa kuwana. Kuzvipira uye kushanda nesimba kuti uone mwanakomana wake achibudirira uye ave mugari akakosha kwaari. Akave nechokwadi chekuti akatsika munzira kwayo, inosanganisira vadzidzisi vake, vakuru vezvikoro, varairidzi vekutarisisa.
Kunyanya, Mumashoko ake, akandirwira, uye zvino ndiri kumurwira." Bam Adebayo akamutengera imba yeimba yekuzvipira kwese Marilyn Blount akaratidza uye anoenderera mberi achiratidza, uye kufara pachiso chake pasi apa kwakaratidza kusina kusungwa.
Bam Adebayo's Mukoma:
Mushure mekuparadzaniswa kwaJohn Adebayo nemukadzi wake, Marilyn Blount, zviri pasina mubvunzo kuti aive neimwe mhuri. Nekudaro, izvi zvinomutsa kune chokwadi chekuti Bam Adebayo ane hama yekurera.
Vakaita kuti izvi zvive pachena pakafa baba vavo, sezvo mukoma waamai vacho vakamupa ruzivo. Zvisinei nekutsvagisa kwakatevedzana painternet, zita remukoma wacho harizivikanwe.
Hatina mubvunzo kuti tinosungirwa kukuvandudza iwe kana ruzivo rwakavhurwa.
About Bam Adebayo's Relative:
Christine Blount ndiye amai vamai veAmerican Basketball player. Muzukuru wake Bam anomuti "Nanny" uye anofarira mbuya vake, vanogara mhiri neimba yavo.
Ambuya vaAdebayo (Christine Blount), zvakadaro, vakawanikwa vaine Cancer. Nekuda kwechirwere cheshuga, iye anodimburwa gumbo. Christine ndiye wechipiri mumhuri yake kubata neCancer, uye tinomushuvira akachengeteka chemo zvikamu.
Mabel Blount ndiye hanzvadzi yaMarilyn Blount. Bam Adebayo naAmai Vake vakatanga kugara mumba mavo pavanosvika kuNorth Carolina Kubva kuNew Jersey. Zvinosuruvarisa, Tete Mabel vakapfuura muna2014 nekuda kwehutachiona Cancer.
Marwadzo aBam Adebayo akanzwa nezverufu rwake aive asingatsananguriki. Amai vake, zvakanyanya, vakakanganiswa nekufa kwehanzvadzi yavo. Isu tinonzwisisa kuti nei akasvika kuna Felicia Turner nekuti akanzwa marwadzo ehutachiona hunouraya mumhuri yake.
Murairidzi Kevin Graves anga ari mukati mekukura kwemutambi Bam Adebayo. Kubva padanho rake rekutanga muHigh School kusvika pahunhu hwake muNBA nhasi. Muchidimbu, akatamba chinzvimbo chababa vake, achigara achimutungamira nhanho dzese dzehupenyu hwake.
Anodziya-Moyo, Anopa Rupo Murairidzi Kevin Makuva Uye Mukadzi Wake Achitarisa Chaizvoizvo Akanaka.
Makuva akatanga kugara Bam mumba make panguva yake yezhizha kuNorth Carolina, zvakamupa mudzidzisi kuti avandudze hunyanzvi hwake. Mukupedzisa kwese, Bam vanomuti Hero yake. Uye isu tine chivimbo kuti mutambi anogara achitenda kwaari.
Bam Adebayo Untold Chokwadi:
Chokwadi, takaongorora iyo biography yemutambi uyu webhasikiti; muchidimbu, zvisinei; kuchine zvimwe zvisingazivikanwi nezve Bam Adebayo izvo zvichatifadza kunze kwebasa rake; Tinopa izvi pasi apa;
Chokwadi # 1 - Kushambadzira kweMuvhi:
Zvichakadaro, mudziviriri weNBA haasi iye chete mutambi webhasikiti. Bam Adebayo ari kuenda kune dzimwe nzvimbo dzemunda, uye panguva ino iri Hollywood Viwanda.
Wakamboona iyo Disney Movie Jungle Cruise? Miami Heat Player, pamwe naJimmy Butler, vakaita zvekushambadzira Jungle cruise. Ona vhidhiyo vhidhiyo pazasi.
Chokwadi # 2 - Kurambwa Kubva Kuna Baba:
Waizviziva here? Kekutanga nguva Bam Adebayo kuisa maziso kuna baba vake mushure mekuparadzaniswa naamai vake kwaive pa13years gare gare. Uye izvi ndipo paakakokwa kuti aone Bam achitamba muNew Jersey.
Chinorwadza kunyanya iye haasi kugara kusvika pakupera kwemutambo. John Adebayo akabuda nepamusuwo wepedyo ndokunyangarika. Mukufamba kwenguva, kurwadziwa uye kurwadziwa kwekuona baba vake vachienda iwe uchida rutsigiro rwavo uye kufara kwaisatsanangurika.
Chokwadi # 3 - Bam Adebayo Chitendero:
Jaya rakakurira pamwe naamai (Marilyn Blount) uyo anoti kubudirira kweNBA Star kuna Mwari; tinoona magwaro anogadziridzwa kubva kubhaibheri akaiswa naBam pasocial media. Zvakadai sokuti “Ngaparege kuva nomunhu anotarisira pasi uduku hwako” ( 1 Timoti 4:12 ).
Zvirevo 14:23 inoti: “Kushanda nesimba kwose kunouyisa mubereko, asi kungotaura kunongouyisa urombo.” Zvose izvi zvinoratidza kuti Bam Adebayo nemhuri yake vaKristu.
Mifananidzo yeMagwaro Matsvene aBam Adebayo paSocial Media Inoratidza Kutenda muna Mwari.
Iyi tafura inoratidza ruzivo rwakapfupi nezveBam Adebayo's Profile.
BAM ADEBAYO WIKI MIBVUNZO
Zita rizere: Edrice Femi Adebayo
Zita rekudanwa: Bam Bam
Zuva rekuzvarwa: 18 Chikunguru 1997
Nzvimbo yekuzvarirwa: Newark, nyika dzakabatana
Baba: John Adebayo
Amai: Marilyn Blount
Vanasekuru Vanasekuru: Christine Blount
Vanasekuru Vanababa: tsva
NetWorth: $5 Mamirioni (2021 Stats)
Kureba mu Tsoka: 6 tsoka 9 inches
Kureba muMeters: 2.06 M
Iyo NBA Goridhe Defender nyaya yakatanga kuNorth Carolina, kwaakasarudza mutambo weBasketball kuti uve chikamu chakasiyana cheramangwana. Kubva pakurambwa nababa uye hurombo hwakaipisisa kusvika mukugamuchirwa nenyika.
Izvo hazvina kumbovhiringidza chido chaBam Adebayo chekubudirira asi chakaita kuti zvive nani iye naamai vake vanodiwa. Muchidimbu, hatigoni kukanganwa zvibayiro uye rudo Marilyn Blount akapa mwanakomana wake.
Pasina kupokana, anodada nezvaBam Adebayo ave nhasi uye nhoroondo yaakasika munyika yeBhasiketi.
Anodiwa anoverengwa zvakanyanya muverengi, Tinoti Hukuru Ndinokutendai nekutora nguva yenyu kugaya iyi vhezheni yeBam Adebayo's Biography. Isu tine hanya zvakanyanya nezvekurongeka tichiendesa idzi dzinonakidza dzehupenyu nyaya dzeBasketball Vatambi.
Nomutsa usakanganwa kuisa komendi kuti ugovane zvaunofunga pamusoro peDziviriro. Zvekare, unogona kutibata kana ukaona chero chinhu chatisina kunyora nemazvo muBiography yedu yeBam Adebayo.